Hafatry ny papa Fransoa ho an’ireo pretra: “Ilaina ny saina sy fo misokatra ary ny fiaraha-miasa…” - ewa.mg
Hafatry ny papa Fransoa ho an’ireo pretra: “Ilaina ny saina sy fo misokatra ary ny fiaraha-miasa…”
News - Hafatry ny papa Fransoa ho an’ireo pretra: “Ilaina ny saina sy fo misokatra ary ny fiaraha-miasa…”
Notanterahina tetsy amin’ny
fiangonana katolika Antanimena, omaly, ny fanavaozana ny
tokim-panompoana ataon’ny pretra, eto anivon’ny
arsidiosezin’Antananarivo. Nivoitra tamin’ny teny fampianarana
nentin’ny arseveka, ny Mgr Razanakolona Odon, tamin’izany, ny
voalazan’ny Soratra Masina. “Raha misy te hanaraka Ahy, aoka
handray ny Hazofijaliana ka hanaraka ahy”, hoy izy. Nanteriny
fa tsy fahazarana ny fanavaozana ny tokim-panompoana tahaka izao.
Fikoloana ny fifandraisana manokana amin’Andriamanitra.
“Nametraka fanamby ho an’ny pretra sy ny olom-boatokana ny papa
Fransoa: saina sy fo misokatra, fifanakalozan-kevitra,
fiaraha-miasa, fitandrovana ny tontolo iainana”, hoy ihany
izy. Notsiahivina tamin’izany fa fakan-tahaka Rasoamanarivo
Victoire sy i Masina Maria. Marihina fa maherin’ny 200 ireo pretra
avy eto anivon’ny arsidiosezin’Antananarivo nanavao ny
tokim-panompoana. Tokony ho natao tamin’ny alakamisy Masina,
nialoha ny fetin’ny Paka teo, izany, araka ny efa fanao, saingy
izao nahemotra izao noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19.
L’article Hafatry ny papa Fransoa ho an’ireo pretra: “Ilaina ny saina sy fo misokatra ary ny fiaraha-miasa…” a été récupéré chez Newsmada.
Fampielezan-kevitry ny K25 : Fihaonambe eny Atsimondrano sy Avaradrano anio
Mitohy hatrany ny fampielezan-kevitra tanterahin’ i Marc Ravalomanana amin’ ny alalan’ny KMMR, ka hisy ny fihaonambe amin’ ny mponina Avaradrano sy Atsimondrano anio. Kaomina telo, Tanjombato, Itaosy ary Sabotsy Namehana no handray ny hetsika lehibe androany. Fotoana iray hampisehoan’ny mponina eny an-toerana sady mpomban’i Marc Ravalomanana ny heriny, ity “rodobe K25” ity. Mandritra io fihaonana io, dia hisy ny toromarika omen’ny kandidà Marc Ravalomanana ireo mpomba azy, amin’ ity fifidianana fihodinana faharoa ity. Marihina fa nahazo vato betsaka indrindra ny kandida laharana faha-25, tamin’ ireto distrika ireto. Toromarika lehibe izay entin’i Marc Ravalomanana amin’ ireo mpomba azy eny amin’ny distrikan’Avaradrano sy Atsimondrano, ny fanentanana ireo mpifidy tsy nanefa ny adidiny tamin’ ny fihodinana voalohany. Eo ihany koa ireo izay voasoratra anarana anatin’ny lisi-pifidianana, nefa tsy naka ny karany. Araka ny efa fanazavan’ny kandidà Marc Ravalomanana hatrany, ny fanentanana izay atao dia tombony ho an’ ny firenena haha marin-toerana ny kandidà lany, ary mampandany ny kandidà laharana faha-25. Tsara ny manamarika fa ny fitambaran’ireo distrika roa ireo dia ahitana mpifidy hatrany amin’ ny 570 000, izany hoe 30% ny mpifidy eto amin’ ny faritra Analamanga. Izany hoe tsy azo tsinontsinoavina ity fotoana anio ity, mba hahazoana fandresena eto amin’ny faritra Analamanga, izay ahitana mpifidy hatrany amin’ ny roa Tapitrisa. Tafiditra anatin’ny fampielezan-kevitra tanterahin’ i Marc Ravalomanana ihany omaly, ny fidinany sy ny firesahany tamin’ ireo mponina teny amin’ny fokontany Antsalovana teny amin’ ny boriborintany voalohany. Tamin’ izany no nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana fanampiana tahaka ny fitaovana fampiasa andavanandro ho an’ny mponina. Noho izany dia tokantrano hatrany amin’ny 940 no nahazo tombony tamin’ny fanampiana, izay marihina fa ny hetsika dia mbola hitohy amina fokontany hafa. Iratra Raitra L’article Fampielezan-kevitry ny K25 : Fihaonambe eny Atsimondrano sy Avaradrano anio est apparu en premier sur .L’article Fampielezan-kevitry ny K25 : Fihaonambe eny Atsimondrano sy Avaradrano anio a été récupéré chez Triatra.
Run: nodimandry i Yves filohan’ny PSA
Tsy ampy iray volana ny nahalasanan’Andrianafetra Faly (Le Roi Lion), teo amin’ny rallye, misaona ihany koa ny tontolon’ny Run eto Madagasikara. Nindaosin’ny fahafatesana, ny asabotsy 22 aogositra lasa teo mantsy Rakotondramoma Mbolofitia Yves, fantatry ny rehetra amin’ny hoe Yves Rakou, filohan’ny fikambanana mpankafy ny Peugeot Sport Automobile (PSA). Araka ny vaovao voaray, lozam-pifamoivoizana tamin’ny moto no nahafaty azy. Raha tsiahivina, anisan’ireo “co-pilote”-n’i Bera, Itompokolahy ary efa tompondakan’i Madagasikara, tamin’izany, ny taona 2013, ho an’ny sokajy M-10 teo amin’ny rallye. Efa tompondaka ihany koa teo amin’ny Run. Ankoatra izay, anisan’ireo mpikarakara ny fifaninanam-pirenena amin’ny Run ny tenany, miaraka amin’ny klioba Asacm, izay misy azy. 33 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana tampoka izao. Namela mananontena sy kamboty mirahavavikely Itompokolahy. Rahampitso alarobia no halevina any Mahitsy i Yves Rakou. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny Run ny Gazety Taratra. Torcelin L’article Run: nodimandry i Yves filohan’ny PSA a été récupéré chez Newsmada.
Dodo Bonimenteur: an-dalana ny fanomanana ny boky angano faha-30
Manosika sy mampiroborobo ny vaky boky, dieny mbola kely ny zaza, ny trano fanontana Dodo Vole. Natao ho azy ireo indrindra ny boky angano, Dodo Bonimenteur, ahitana kisarisary nataon’ny ankizy toa azy. Hivoaka amin’ny fiandohan’ny taona 2020 ny andiany faha-30 amin’izany boky izany.Any Andilana Nosy-be, amin’izao fotoana izao, ry Johary Ravaloson sy ny ekipa avy amin’ny trano fanontana Dodo Vole, manomana ny boky angano faha-30, ao anatin’ny tetikasa Dodo Bonimenteur. Ny ankizy mpianatra amin’ny kilasy CE2 sy CM1, ao amin’ny sekoly ambaratonga fototra Utopiks Loustiks, no nofidin’izy ireo handray anjara amin’ny fitantarana an-tsary ny angano, ao anatin’ity boky vaovao ity.Araka ny safidin’ireo ankizy àry, ny tantaran’Itrimobe no hatao. Etsy andaniny, handray anjara amin’ity boky ity koa ny mpianatra amin’ny Collège de Guillers, any Finistère-Bretagne. Hamenoan’izy ireo ny boky ny angano “Breton” iray, mitantara bibiolona, antsoina hoe Goulaffre. Amin’ny volana septambra kosa no hihazo ity toerana iray, any Frantsa ity, ny ekipa avy amin’ny Dodo Vole.Araka ny fanazavan’i Johary Ravaloson, mpanoratra sy tompon’andraikitra ao amin’ity trano fanontam-boky ity, hivoaka amin’ny voalohan’ny taona 2020 ny boky angano. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny faritra Diana sy Finistère, ny sekoly Utopiks Loustiks, ny Collège de Guillers ary ny Dodo Vole izany.Raha tsiahivina, angano raiketina an-tsoratra sy atao an-tsary ny boky Dodo Bonimenteur. Mampifandray kilasy eto Madagasikara sy any Frantsa ny tetikasa ary efa maro ny ankizy malagasy nandray anjara tamin’ireo boky miisa 29 efa nivoaka. Maharitra herinandro ny fidinana any amin’ny sekoly mandray anjara, amin’ny fotoana fanatontosana ny boky, toy ity any Andilana Nosy-be ity.Marihina fa, rehefa mivoaka ny boky, samy mahazo ny anjarany ireo ankizy ao amin’ny kilasy nandray anjara tamin’izany. Tanjon’ny Dodo Vole ny hamelona indray ireo angano avy any amin’ny faritra samihafa sy ny hampivelatra ny fitiavan’ny ankizy mamaky boky, izay santarina amin’ny boky angano.Landy R. L’article Dodo Bonimenteur: an-dalana ny fanomanana ny boky angano faha-30 a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fantatra loatra: misy sokajy teatra ny Faribolana Sandratra
Mitohy hatrany ny fiakarana an-tsehatra ho an’ny Faribolana Sandratra. Hatreto anefa, ny tononkalo sy ny fiantsana izany ihany no tena fantatry ny olona. « Manana sokajy hafa ihany koa izahay », hoy ny mpikambana iray…Mitohy hatrany ny hetsika tontosain’ny Faribolana Sandratra. Tato ho ato, tsy nijanona tamin’ny tontolon’ny soratra intsony izany fa nivelatra tamina teatra ihany koa. « Hatramin’izay, ny tononkalo hatrany no nahalalan’ny olona ny Sandratra. Mbola vitsy ny mahafantatra fa misy sokajy mozika sy kabary ary teatra ao », hoy i Zo-Maminirina, mpikambana ao amin’ny Faribolana Sandratra. Nomarihiny hatrany fa na mikatona azy ny trano nilalaovana teatra nahazatra hatramin’izay, tsy mifidy toerana ny sokajy teatra ao amin’ny Faribolana Sandratra fa afaka milalao eo amin’izay sehatra omena azy, toy ny sekoly sy ny tranompokonolona. Efa tany amin’ny taona 1989 no efa nilalaovan’ny Faribolana Sandratra ny tantara « Mangahazo mamy » nosoratan’i Louis Vahandanitra. Taona 1998 ny « Andraso eo Paoly » diapenin’i Lydiary, taona 2006 ny « Ny variraiventy farany » nosoratan’i E.D Andriamalala, sns.Amin’ity volana ity, ny asabotsy 27 jolay izao no hitondran’i Ny Iraka Rambolamanana sy i Nary Mamitiana ny antsa tononkalo « Rezatra » etsy amin’ny CGM Analakely.HaRy Razafindrakoto L’article Tsy fantatra loatra: misy sokajy teatra ny Faribolana Sandratra a été récupéré chez Newsmada.
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Sur les 451 tests effectués ces dernières 24 heures, 20 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus a rapporté ce lundi 21 septembre la porte-parole du CCO. Ainsi, Madagascar compte actuellement 16073 contaminations depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le pays. Ces nouveaux cas ont été majoritairement localisés dans la région Analamanga avec un total de 12 cas. Le reste est réparti comme suit: 4 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Itasy, 1 cas à Alaotra Mangoro, 1 cas à Matsiatra Ambony et 1 cas à Boeny. Ce jour, 36 patients ont recouvré la santé portant à 14682 le nombre total de guérisons dans tout le territoire malagasy. Par ailleurs, 1164 malades sont encore en traitement, dont 20 dans un état critique. Deux nouveaux décès ont été communiqués. Désormais, le nombre officiel des victimes s’élève à 225. L’article COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Vita ny fanarenana ny tranon’ny CNEMD: nahavita fiofanana ambony ireo mpampianatra mozika
Tsy mitovy ny nandalo sekoly fianarana mozika sy ny manao mozika fotsiny… Noporofoin’ireo mpianatra sy mpampianatra ao amin’ny CNEMD izany, nandritra ny lanonana roa sosona, omaly.CNEM, Ivontoeram-pirenena mampianatra mozika taloha, izay niampy ny dihy ka lasa CNEMD, ankehitriny. Mahalala azy avokoa ireo liana tamin’ny fianarana mozika rehetra. Saika nandalo nandranto fianarana tao ihany koa ireo andrarezina amin’ny mozika… Saingy nampalahelo fa simba tsikelikely ilay tranon’ny CNEMD ao ambadiky ny Tranombokim-pirenena ka tsy nampiasaina intsony, ny taona 2019. « Raha nandray ny fitantanana ny minisitera aho, ny taona 2019, naniry ny hitsidika ny ato amin’ny CNEMD. Nambara tamiko tamin’izany anefa fa tsy azo idirana intsony ity trano fianarana mozika manana ny lazany ity, noho ny fahasimbany. Tsy nisy nanamboatra nandritra ny taona maro kanefa dia toeram-piasana sy fandraisana olona izy ity. Nanapa-kevitra avy hatrany ny minisitera hiroso amin’ny asa fanarenana, noho ny fahatsapana ny maha zava-dehibe ity toeram-pianarana zavakanto ity. Vita izao ny asa ary tsy ny trano ihany no nasiam-panavaozana fa ny fomba fampitana fahalalana ato ihany koa ho mendrika izany hoe CNEMD izany”, hoy ny nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, omaly. Notokanana omaly, araka izany, ny trano nasiam-panamboaran’ny CNEMD. Niara-dalana tamin’izany ny fanolorana mari-pahaizana ireo mpampianatra sady mpikaroka miisa 13. “Mpampianatra manan-talenta avokoa izy ireo, izay mbola naniry ny hanatevina fahalalana. Nahavita soa aman-tsara ny fiofanana izy ireo ka mendrika ny homena ny mari-pahaizana ambony mifanaraka amin’ny lentany”, hoy kosa ny nambaran-dRazafindrazaka Holy, talen’ny CNEMD. Misongadina ry Zazakanto Nanapa-kevitra ny minisitera sy ireo teknisianina amin’ny sehatry ny mozika, hitondra fanazaovana amin’ny fampianarana mba hifanaraka amin’ny maha izy azy antsika sy ny iainan’ny Malagasy. Anisan’ireo mpianatra, tamin’iny taom-pianarana iny, noraisin’ny CNEMD sy nisitraka izany fanavaozana izany ry zalahy Zazakanto. Vao volana vitsy monja, kanefa efa nahafolaka zavamaneno sahady izy ireo, hany ka tafatsangana ireo mpanotrona rehetra taorian’ny seho fohy nataon’ireto manan-talenta ireto. Nisy 103 ireo mpianatra nandritra iny taom-pianarana iny ka ny 69 tamin’ireo no afaka tamin’ny fanadinana. Tsy tena sakana loatra tamin’ny fampianarana ny fihibohana, satria ampy ihany ny fotoana namitana ny fandaharam-pianarana, raha ny fanazavana. Fantatra fa hatao tanjona manaraka ny fanokafana ireo rantsan’ny CNEMD any amin’ny faritra. Eo koa ny fampiarahana ny asa, izay iandraiketan’ity ivontoeram-pampianarana mozika sy dihy ity, amin’ny Akademiam-pirenen’ny zavakanto sy ny kolontsaina, izay ho vita ny volana janoary 2021.Zo ny Aina L’article Vita ny fanarenana ny tranon’ny CNEMD: nahavita fiofanana ambony ireo mpampianatra mozika a été récupéré chez Newsmada.
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fiofanana ho mpanazatra “niveau 2”, taranja fibatana fonjamby, tanterahina etsy amin’ny kianja mitafo Ankorondrano. Mialoha ny hanomezana Mari-pankasitrahana ireo mpiofana, hiatrika fanadinana izy ireo anio sy rahampitso. Adina an-tsoratra sy fampiharana moa no hataon’izy ireo amin’izany. Tsiahivina, 10 andro ny faharetan’ity fiofanana ity ary efa nanomboka ny herinandro lasa teo izany. Mpampiofana manana ny maha izy ny mizara traikefa, manam-pahaizana iraisam-pirenena malagasy, hahitana an’ i Harimalala Solomampionona Rakotoarisena. Miisa 20 mianadahy ny miofana ary avy amin’ny ligy 6, Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Itasy, Boeny ary Vakinankaratra. Nambaran’ny mpampiofana fa nisy fitohizana satria ireo niatrika ny “niveau 1” ihany ireto manaraka ny fampianarana ho an’ny “niveau 2” ireto. Izany hoe, efa manomboka miditra lalindalina kokoa amin’ny “planification”, “périodisation”, “anatomie”ary ny “blessure”. Antenaina, araka izany fa hitondra fivoarana eo amin’ireto mpiofana ireto, raha ny nambaran’ny mpampiofana hatrany. Azo lazaina ho fohy rahateo ny fotoana kanefa mbola maro ny tiana hampitaina ka inoana fa any amin’ny fampiharana no hanatevina ny fahalalany ny mpiofana. Mi.RazL’article Fonjamby-Fiofanana: anio sy rahampitso ny fanadinana a été récupéré chez Newsmada.
Tenisy – Roland Garros: niditra an-tsehatra i Tessah sy i Irina
Nanomboka omaly alatsinainy 21 septambra ny fifanintsanana hiadiana ny amboaran’i Roland Garros, taranja tenisy. Fihaonana tanterahina any Frantsa. Anisan’ireo miatrika ity fifanintsanana ity ireo Malagasy mirahavavy, Andrianjafitrimo Tessah sy Ramialison Irina, saingy tsy mbola voaray ny voka-dalao teo amin’izy ireo. Ankoatra izay, nosembanin-drahona ny fanombohan’ity lalao ity, satria mpilalao dimy no voatery nesorina fa voan’ilay valanaretina “coronavirus”. Rehefa natao ny fitiliana, ny roa tamin’izy ireo no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina fa ny telo kosa tranga fifampikasohana avy amin’ny mpanazatra azy ireo, izay tratry ny “coronavirus” ihany koa.Nanapa-kevitra avy hatrany ny talen’ny fifaninanana fa tsy afaka mandray anjara izy ireo. Nampiharina tamin’izy ireo ny fanokana-monina mandritra ny 7 andro. Tsy nambara kosa ny anarana sy ny fiavian’ireo mpilalao voalaza fa voan’ny “covid 19”, ireo. Tsiahivina fa nahatratra 900 ny fitiliana natao nanomboka ny 17 septambra lasa teo. Tsy anisan’ireo voan’ny “covid 19” aloha izy ireo ka afaka mifaninana tsara. Haharitra hatramin’ny zoma 25 septambra ho avy izao ity fifanintsanana ity. Ny alatsinainy 27 septambra kosa vao tena hiditra amin’ny fifaninanana ny rehetra, izay haharitra hatramin’ny 11 oktobra, ho avy izao.Ho fanajana ny hamehana ara-pahasalamana, ferana ho 5000 isan’andro ihany ny isan’ireo mpijery afaka manatrika ny lalao. TompondakaL’article Tenisy – Roland Garros: niditra an-tsehatra i Tessah sy i Irina a été récupéré chez Newsmada.